चौरीदेराली गाउँपालिकामा जागिरे हुन माओवादी नै हुनुपर्ने ? – मिलिजुली खबर
in गृहपृष्ठ, राजनीति, समाज
उसो त नेपालमा जागिर पाउनै मुस्किल छ । जागिर खुलाएपनि अगाडि नै आफ्नो आफन्त भर्ती गरेर पारदर्शिता देखाउन मात्रै सूचना सार्वजनिक गर्ने चलन नौलो होईन । त्यसमा पनि जागिर खाने मान्छे र घरपरिवार कुन पार्टीको, सकेसम्म नातागोता, अझ थर मिलान गर्ने कोशिस गरिन्छ ।
नेपालको प्रचलित कानून अनुसार पनि कुनै पार्टी, जात, धर्म, भाषा, लिंग, वर्णलाई आधार बनाएर जागिर दिने वा नदिने भन्न पाईन्न । तर हाम्रो मुलुकमा कानुनको कार्यान्वय कहिल्यै हुँदैन । आफ्नो मान्छे छ भने अनुभव नभए पनि हुन्छ, नियम, कानुन केहि पनि छेक्दैन ।
एउटा उदाहरण हेरौँ काभ्रेको चौरीदेराली गाउँपालिकाको
बैशाख २२ गते गाउँपालिकाले अ.हे.ब पदमा ६ जना, अ. न.मी पदमा ३ जना र सब अ.न.मी पदमा १ जना गरी जम्मा ९ जनाको लागि करारमा जागिर खुलायो । आवेदन दिने समय बैशाख २८ गतेसम्म थियो । ३० गते आवेदक मध्यबाट अन्तर्वार्तामा परेकाको नामावली प्रकाशन गर्यो ।
२ गते हुने अन्तर्वार्ताका लागि सक्कल शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पत्र, सम्बन्धित काउन्सिलका दर्ता भएको प्रमाण पत्र र नागरिकता सहित पालिकाको केन्द्र उपस्थित हुन भनियो । मुलुकमा अहिले कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा छ । यस्तो अवस्थामा सबै जना अन्तर्वार्ता गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्नु सम्भावना नै थिएन् ।
घर नजिक हुनेहरू जसो तसो पुगे अन्तर्वार्ता दिए । तर गाउँपालिकाले नतिजा प्रकाशन गर्ने बेला भने अन्तर्वार्तामै सहभागी नभएका ब्यक्ति छनौट गरेको पाईएको छ । यसमा गाउँपालिकाको पदपुर्ति समिति निकै चुकेको पाईन्छ । किन भने परिस्थिति अनुसार अन्तर्वार्ता टेलिफोन वा भर्चुअल विधिबाट हुने भनिएको भए पारदर्शी बन्न केहि मद्दत पुग्थ्यो । तर पालिकाले त्यसो भनेन, गाउँपालिकामै आउन भनेको थियो ।
छनौट भएका कतिपयलाई त आफुलाई नाम निस्कियो भनेर फोन मात्रै आएको, अन्तर्वार्तामा उपस्थित नभएको समेत बताएका छन् । (त्यो अडियो सुरक्षित छ) । पालिकाले नतिजा प्रकाशन गरेपछि हेल्थ असिस्टेन्टको लागि अन्तर्वार्ता दिएका चौरीदेराली गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का निलकण्ठ गौतमले सामाजिक सञ्जालमा गाउँपालिकाले गरेको बदमासी बाहिर ल्याउने कोशिस गरेका छन् ।
गौतमले लेखेको स्टाटस एकैछिन पढौ ‘चौरीदेउराली गाउँपालिका नेकपा माओवादीको कार्यालय हो कि गाउँपालिकाको कार्यालय हो ? गाउँपालिकामा हे.अ रिक्त पदमा आवेदन दिँदाको आफ्नो अनुभब:
अन्तर्वार्तामा हामी ५ जना छनोट भएका थियौ भने गाउँपालिकाले २ जना मागेको थियो । जसमा गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा म १ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा संलग्न थिए । यस बिचमा नेकपा माओवादीलाई पार्टीगत हिसाबमा सहयोग गर्नु पर्छ भनेर अनेक फोन कलसँगै मान्छेहरु भेट्न आए । तर पनि आफु नेकपा एमाले भएकोले आफ्नो ब्यक्तीगत स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै प्रस्तुत भएँ । तर आज अन्तर्बार्तामा उपस्थित नभएको मान्छे छनोट भएर राजनैतिक पुर्वाग्रह गरेर नेकपा एमाले भएकै कारण यस पालिकामा छनोट नभएको हुँदा बास्तबिक कुरा आम जनसमुदायमा प्रस्ट बनाउ चाहन्छु । छि तिमीहरुको राजनिति । याद रहोस् यसको हिसाब एक एक गरि जनताले अबश्य राख्नेछन् ।……सोध्न मन छ सम्बन्धित निकायलाई ? कहिलेसम्म खेल्छौ र कतिन्जेल फोहोर बनाईराख्छौ राजनितिलाई ?
क्षमा चाहन्छु गाउँपालिका बासी तपाईहरुलाई सेवा गर्ने अवसर मेरो कित्ता माओबादी नभएकै कारण गुम्यो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यसो गर्न पाइन्छ भन्दा किन मौन कुनै बिधि र बिधान आवश्यक पर्दैन ? जे गरे नि सहनै पर्ने हो ? सरकारवाला सम्बन्धित निकायहरुलाई यससँग सम्बन्धीत थप प्रमाण, फोन रेकर्ड आदि आबश्यक परेमा उपलब्ध गराउने छु !९८४२४७८८१०’
यो स्टाटस झट् हेर्दा जागिर खान नपाएको आक्रोश जस्तो देखिन्छ । अझ कतिलाई गौतमले सजिलो नै बनाईदिएका छन् आफु एमाले भएको कुरा खुलाम, खुल्ला लेखिदिएर । चौरीदेराली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ । यो एउटा अरोप मात्रै हो पनि भन्न कतिपयले सक्लान् ।
तर यो भित्रका कयौँ प्रश्नको जवाफ गाउँपालिकाले दिनै पर्छ । काभ्रेका सबै स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका छन् । तर यसरी राजनीतिक पूर्वग्रह वा अन्तर्वार्तामै सहभागी नभएका ब्यक्तिलाई जागिर नै खान दिएको कुरा बाहिर आएको छैन । वा निलकण्ठ गौतमले जस्तो आट कसैले गरेनन् ।
यो विषयमा बुझ्न खोज्दा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महान दास लामा जवाफ विहिन हुनुहुन्थ्यो । यसबाट पनि प्रष्टै हुन्छ की कर्मचारी नियुक्तमा ठूलै गडबड छ । उहाँले कुनै पनि प्रश्नको जवाफ निर्धक्क भएर दिन सक्नुभएन । मुस्किलले मधुरो स्वरमा अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकाकै नाम निकालिएको दाबी गर्न भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामा भ्याउनुभयो ।
पनौतीमा कृत्रिम गर्भाधान रोकियो, रसायनिक मल पर्याप्त
Breaking news: काभ्रेको कोशीपारीमा टिपर पल्टियो, चालकको मृत्यु
भकुण्डेमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भेला तथा प्रशिक्षण सुरू
काभ्रेबाट अबैध चिरान काठ सहित दुई जना प क्राउ
गोकुल बाँस्कोटालाई अध्यक्ष वाईबाको दुई प्रश्न, थुप्रै चुनौती (भिडिओ)